Apple taa na-agba ụbọchị ọmụmụ nke abụọ mbụ Apple Store | Esi m mac
Apple na-eme ncheta ọmụmụ ụbọchị nke izizi Apple Stores taa
Taa akara afọ 15 kemgbe Apple mbụ meghere a Apple Store, kpọmkwem ụlọ ahịa abụọ nke e mejuputara echiche ndị ọhụụ Steve Jobs nwere maka oge mbụ. Taa anyị maara na Apple Stores aghọwo ụlọ nsọ nke ofufe maka Fans nke apụl ika na Ọ bụ ya mere anyị ji chọọ itinye aka na ememe a taa na blog anyị.
Na May 19, 2001, Tysons Corner Apple Store dị na Virginia na Glendale Store dị na California mepere ụzọ ha. Ọ bụ oge mbụ Apple nwere ụlọ ahịa anụ ahụ ebe inwe ike ịga zụta ngwaahịa ha na mgbakwunye na ịnụ ụtọ ọrụ ndị ọzọ na nke a mere ka ha nwee ihe ịga nke ọma.
N'ime afọ 2001 Apple mepere ihe karịrị ụlọ ahịa iri abụọ na ise, nke mere ka mmụba dị egwu na azụmaahịa karịa karịa n'otu afọ ahụ bụ mgbe iPod Classic bịara ụwa ma soro ya gbanwee ụwa egwu. Nke a bụ ihe ịga nke ọma nke ụlọ ahịa abụọ mbụ anyị kwuru na anyị nwere ike inye gị ozi ahụ na ihe ruru mmadụ 8.000 bụ ndị gafere ha na ngwụcha izu izizi ha na-ewepụta ihe karịrị narị puku dọla ise.
Ugbu a, Steve Jobs abụghị naanị onye nwere echiche iji mejuputa ụlọ ahịa Apple ma anyị nwere ike icheta na ọ rụkọrọ ọrụ nke ọma otu ndi oru ndi amara dika otu ụlọ ahịa N'ime ya bụ Millard Drexler na Ron Johnson, ndị ọkachamara n'ọdịdị nke ụlọ ahịa anụ ahụ.
Yabụ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ndị nyocha izizi ebughi amụma banyere ihe ịga nke ọma maka ụdị ụlọ ahịa ndị Steve Jobs chepụtara, ha malitere ịbawanye na United States ruo mgbe na 2003 amalitere na mba ahụ ma Apple Store wee pụta. na mba ndị ọzọ na-eru ihe karịrị narị ụlọ ahịa anọ na iri ise taa agbasaala gbasaa n'ụwa niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Apple na-eme ncheta ọmụmụ ụbọchị nke izizi Apple Stores taa
10 mgbanwe ọhụrụ na iTunes 12.4
Complete guide to afanyekwa multitasking si iPad (I)